Iveki yeWWDC, iMac Pro, iPodPod kunye nokunye. Eyona veki ilungileyo ndivela kuyo iMac | Ndisuka mac
Le veki ngokungathandabuzekiyo iphawulwe ngumbhalo ophambili ka-Apple obubanjelwe eMcEnery Convention Centre eSan Jose, ngoMvulo odlulileyo, nge-5 kaJuni. Ukusukela oko isiqinisekiso sika-Apple sombhalo ophambili weWWDC, amarhe kunye nokuvuza akuyekanga ukufika malunga nezinto esinokuzibona nezingabonwayo, ngoku into ephambili idlulile kunye neenkomfa ezibanjelwe abaphuhlisi kwezi ntsuku zilandelayo. Kuyo yonke le veki sibone iindaba ezimbalwa apha Uluhlu lweMac, iprosesa entsha ye-10,5-intshi ye-iPad Pro ngakumbi iPod yasekhaya isithethi sasekhaya esiyilwe yi-Apple equlathe iprosesa ye-A8 ngaphakathi. Ukongeza kuzo zonke izinto eziphuculweyo kunye nezixhobo ezintsha sikubonile ukuphuculwa kwe IMacOS ePhakamileyo yeSierra, i-iOS 11, iwOSOS 4, kunye netvOS.
Ke sihamba ngamacandelo kwaye njengoko siqinisekile ukuba uninzi lwabo bakhoyo ziyazazi iindaba ezithiwa thaca ngabafana baseCupertino in iWWDC yalo nyaka, Siqale ngesipho esinqwenelekayo kunye nesasekuqaleni esenziwe yiApple kwabo babekho, a Ibhatyi kaLevi eyenzelwe umcimbi kunye nezikhonkwane.
KwiiMacs ezihlaziyiweyo sinokuqaqambisa iMac Pro, isilo sokwenyani sohlobo lwaso kwaye kude kube yeyona desktop inamandla yeApple namhlanje. Esi sixhobo senzelwe iingcali kunye noqwalaselo lwesiseko luqala kwi- $ 4.999, ke asifuni nokucinga ngemodeli enamandla kakhulu. Ewe sijamelene nekhompyuter inee-specs ezikhohlakeleyo.
Ngokuphathelele kwimveliso entsha eboniswe yiApple, iPod yasekhaya, sinokuthi siyayithanda kancinci. Iimpawu zokuqala zilungile kwaye Ixabiso linokuba yingxaki kuphela kwinxalenye enkulu yabasebenzisi kodwa nabani na oqondayo kwaye athenge ezi ntlobo zezithethi uyazi ukuba azibizi kakhulu.
Okokugqibela asinakubeka ecaleni iMacOS ePhakamileyo yeSierra. Ngaba Inguqulelo entsha yenkqubo yokusebenza yeeMacs Sele isezandleni zabaphuhlisi kwaye kungekudala siza kuba nohlobo lwe-beta yoluntu kwabo bafuna ukuzama ukubona zonke izinto ezintsha ezongeziweyo. Kwiwebhu uyakufumana lonke ulwazi malunga nento eyenzekileyo ngalo Mvulo uphelileyo, nge-5 kaJuni, kuba zininzi iindaba malunga neWWDC, izixhobo zekhompyutha kunye nesoftware ethiwe thaca yiApple.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Iveki yeWWDC, iMac Pro, iPodPod kunye nokunye. Eyona veki ibalaseleyo ndivela eMac
Ngaba iMacBook entsha iyi-rig yemisebenzi enyanzelisayo?